Warshad Khudaarta Qabow Degdeg ah - Shiinaha Soosaarayaasha Khudradda Dheecaannada Degdega ah, Alaab-qeybiyeyaasha
Soo bandhigida alaabta Diiwan geli alaabta ceeriin, inta badan baradhada hilibka cad. Qeexitaanka sheyga 10mm 、 15mm 、 17mm ， Randomcut3.5g / 6g / 7g Waxyaabaha soo saaraha Codso kanaal Ku habboon habeynta cuntada, silsiladda makhaayadaha iyo warshadaha kale. Xaaladaha keydinta Hoosudhaca Cryopreservation -18 system Nidaamka qaboojinta degdegga ah. Nidaamka qaboojinta CAS waa isku-darka aag-maskaxeed firfircoon iyo aag magnetic oo joogto ah, kaas oo ka sii deynaya tamar yar darbiga si uu u sameeyo meco-biyoodka ku jira ...
Hordhaca alaabada Qalabka ceeriin ee salka diiwaanka khudradda specific Qeexitaanka badeecada Iska yaree 5mm 、 10mm Waxyaalaha alaabta ah Codso kanaal Ku habboon habeynta cuntada, silsiladda makhaayadaha iyo warshadaha kale. Xaaladaha keydinta Hoosudhaca Cryopreservation -18 system Nidaamka qaboojinta degdegga ah. Nidaamka qaboojinta CAS waa isku-darka aag-maskaxeed firfircoon iyo aag magnetic static ah, kaas oo ka sii deynaya tamar yar darbiga si uu u sameeyo meykuladalada biyaha ee cuntada ku jira mid yar iyo labis, iyo ...
Hordhaca badeecada Laga soo bilaabo saldhiga diiwaanka, isticmaalka saddexda nooc ee karootada cas ee Japan, midabbo dhalaalaya, galitaan macaan. faahfaahinta Dicing, shirib, jeex. Aqbal qaababka alaabta ee gaarka ah Codso kanaalka Ku habboon habeynta cuntada, silsiladda makhaayadaha iyo warshadaha kale conditions Xaaladaha keydinta Cryopreservation ka hooseeya -18 system Nidaamka qaboojinta degdegga ah. Nidaamka qaboojinta CAS waa isku-darka aag-maskaxeed firfircoon iyo baaxad magnetic oo joogto ah, kaas oo tamar yar ka sii deynaya ...